Musharax Madaxweyne Guuleed oo ka digey in xanuunka Covid 19 la siyaasadeeyo -
Home News Musharax Madaxweyne Guuleed oo ka digey in xanuunka Covid 19 la siyaasadeeyo
Musharax Madaxweyne Guuleed oo ka digey in xanuunka Covid 19 la siyaasadeeyo
Guddoomiyaha Xisbiga Sahan Cabdikariin Xuseen Guuleed oo xubin ka ah Midowga Musharixiinta ayaa ka digey in Dowladda federaalka ay siyaasadeydo xaaladda Covid-19 isla markaana ay ku dhacdo doorashooyinka la qorsheynayo in dalka ay ka dhacaan.
Cabdikariin Xuseen Guuleed oo warbaahinta maanta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ilaalinta caafimaadka dadka ay ku tahay waajib dowlada uuna cudurka Covid 19 yahay mid caalamka oo idil ka jira,hase yeeshee ay ka shakisan yihiin in cudurkan laga dhigto marmarsiinyo lagu dhaco doorashada dalka.
“Xaaladda Covid-19 waa mid guud ahaan dadka looga baahan yahay in ay ka taxadaraan, waxaana qabnaa shaki la xiriira in ay Dowladdu siyaasadeyso kiisaska xannuunka iyada oo qorshaheedu yahay in lagu dhaco Doorashooyinka lagu heshiiyay in ay dalka ka dhacaan” Sidaasi waxaa yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in waqtiga Madaxda Dowladda Federaalka uu dhammaaday, isla markaana aysan jirin doorashooyin muuqda, sababtaas ayuu ku tilmaamay in uu ku dhashay isku soo bixinta dadka.
“Mudaharaadku waa mid dastuuri ah, waxa uu ka dhashay doorashooyinka dalka oo aan qabsoomin, Dowladdu qudheeda waxa ay dadka isugu soo bixisaa marka la taageerayo guulaheeda, halka ay diido kan lagu muujinayo gaabiskeeda, haddaba maxaa xalaaleeyay kan Dowladda oo kan mucaaradka xaaraantimeeyay” ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Waxaa magaalada Muqdisho ka soconaya haatan kulamo gaar gaar ah oo ay yeelanayaan musharaxiinta madaxweynaha ay la yeelanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo taageerayaashooda si ay ugaga soo qeybgalaan banaanbaxa ay ku baaqeen maalinta jimcaha ee soo socota.
Previous articleNigeria sends security chiefs after gunmen kidnap schoolboys, teachers
Next articleQuiet Mardi Gras goes on without parade, bars